Biby tsy manan-doha tsy mandeha !
Fanovana mankaiza marina !
Maro ny karazana tetikasa nandalo teto amin’ny firenena hatramin’ny faha-Repoblika voalohany ka hatramin’izao Repoblika fahaefatra : tetikasa dimy taona, tetika 10 taona, fanitsiana ara-drafitra, famarotana ny fananam-panjakana na privatisation… Fa e e mihemotra hatrany isika amin’ny laharana maneran-tany. Ka fanovana mankaiza indray ny amin’izao… ?
Mitombo ny olana, ary ny vahaolana ?
P.Prospère il y a 4 mois
Olana ny jiro sy rano, fifamalian'ny eo amin’ny mpitondra mpanatanteraka sy ny mpitantana ny Jirama no vahaolana. Olana ny vidim-bary amin'ny kapoaka, fanovana ny kapoaka famarana no vahaolana entin’ny fanjakana. Tsy voafehin'ny goverinemanta ny vidim-piainana, tsy mila soloina ny goverinemanta… Santionan’ny amin’ny olana sy vahaolana ireo. Dia ahoana koa… ?
Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena !
'Lasan'ny vazaha ny vadiko...' hoy ilay hira ary dia nalaza vetivety ilay hira no tonga antsaina mahita an'ity volamena 73,5 kilao ity. Ny filankevitry ny ministry moa milaza fa 73,7 kilao no tena izy. Io no zary hirahirain'ny mpiserasera iza manao hoe 'Lasan'ny vazaha ny volamenako e'... Misy tambajotra mihitsy ao e. Dia ahoana?
Madagasikara afaka no mandroso !
Vaovao ny taona, fotoana hanaovana velirano vaovao izao. Ny olana anefa dia ny fomba fanao teo aloha teo ihany no tazana hatevenina mihitsy aza. Koa ho tratra ve ilay hoe Madagasikara afaka no mandroso no tanjona?
Ny ampitson’i Madagasikara araka ny Banky iraisam-pirenena
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro ny matoan-dahatsorata norenesinao tao amin’ny Feon’i Lakroa tao amin’ny RDB ny talata 29 desambra teo. Io izany ny matoan-dahatsoratra namarana ny taona 2020. Samia ho tahin’Andriamanita isika rehetra, ho taona zina ny 2021 na ratsy aza ny vinavina...